Iirayisi zokupheka omelette: isitayile saseJapan, kunye netshizi, kubhakwe kunye nokunye! | Ukupheka kweKhitshi
USusana godoy | | Amangenelo ashushu, ngokubanzi, Iiresiphi ezikhethekileyo, Iiresiphi ezilula
Ngaba ukhe wazama irayisi omelette? Zininzi iintlobo zetortilla, iitapile, imifuno, ityhuna, ham kunye netshizi njalo
Kodwa namhlanje ndikuzisela eyona ikhethekileyo, irayisi omelette etyebileyo. Ewe, njengokuba uyifunda, I-omelette yelayisi kwaye ndikuqinisekisa ukuba iyamnandi.
Ukuqala kwam ukubona le rice omelette, yayikwincwadi yeeresiphi kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame ukuyinqwenela, ngoku yenye yeendlela endithanda kakhulu ukutya irayisi.
Ukuqala kwam ukuyibona, yayikwincwadi yokupheka kwaye ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame ukuyinqwenela, ngoku kunjalo enye yeendlela endithanda kakhulu ukutya irayisi. Izithako zinengqiqo kunye nexesha elifanelekileyo lokutya kakuhle.
Inkcazo ilula, ilungile kufuneka sipheke irayisi, njengoko sihlala sisenza. Kumanzi abilayo, ityuwa kunye neethontsi ezimbalwa zeoyile, yindlela endenza ngayo, ngamanye amaxesha ndongeza i-clove yegalikhi. Xa sinerayisi ebilisiweyo, siyayikhupha siyigcine.
Sibeka ipani eneoyile encinci yokutshisa, Ngelixa sibetha amaqanda ambalwa (ndenza i-omelette yerayisi nganye). Xa sinamaqanda sifaka intwana yetyuwa nepepile encinci kwirayisi. Sidibanisa konke. Ukuba sinepani eshushu, sinako uthele lo mxube ngepani ukwenzela ukuba i-omelette yenziwe.
Siyiyeka ibrown kumacala omabini, siyijike xa ichukumisa kwaye singayisusa xa sibona ukuba ilungile.
Ngokusengqiqweni, nganye inendawo yokupheka iitortilla, nokuba zenziwe kakuhle, kunye neqanda ukuya kwinqanaba, njl. Unokulandela iikhrayitheriya ezifanayo zerayisi omelette. Ndingakunqwenelela kuphela amathamsanqa kunye nezimvo onokuthi uzenze yongeza i-anyanisi encinci okanye uthinte i-chorizo.
Kwaye ukuba unayo irayisi eseleyo, ungathandabuzi ukuthatha ithuba lokwenza oko iikeyiki zerayisi, iresiphi elula kakhulu enencasa.
1 I-omelette yerayisi yaseJapan
1.1 Izithako zabantu ababini
2 Irayisi kunye ne-omelette yeshizi
3 Ungayisebenzisa irayisi emdaka?
4 Uyenza njani i-omelette yerayisi ebhaka
4.1 Izithako zabantu aba-4
I-omelette yerayisi yaseJapan
Ukudityaniswa kwento esiyaziyo njenge-omelette kunye nerayisi eqhotsiweyo, kusishiya sisitya esilula, esikhawulezayo nesilungileyo. Kwiindawo zaseKorea naseTaiwan kuyinto eqhelekileyo ukuyifumana. Ngokubanzi, singayichaza njengerayisi eyenziwe ngenkuku okanye imifuno kwaye isongelwe ngomaleko we-French omelette. Ngaba oko akubonakali ngathi kuyimbono entle kuwe?
Izithako zabantu ababini
1 iglasi yerayisi
Iiglasi ezi-2 zamanzi
Iigram ezingama-150 zebele yenkukhu
Ipepile ebomvu nebomvu
Kuqala sipheka irayisi ngamanzi kunye netyuwa encinci. Kwelinye icala, siza kunqunqa ibele lenkukhu kakuhle. Siza kwenza okufanayo nepepile kunye netswele. Siza kubeka ipani emlilweni ngepunipoon yeoyile kwaye emdaka izithako zangaphambili. Xa irayisi iphekiwe, siyongeza epanini. Siza kushiya imizuzu embalwa ngelixa sishukumisa ukuze ii-flavour zixube. Sidibanisa isosi yetumato encinci. Kwenye ipani, siya kuthi ii-omelette zaseFransi. Baya kuba ngamaqanda amabini ngamanye. Xa sele belungile, yongeza umxube welayisi kwaye usondele ukutywina ngocoselelo. Unokuyihobisa ngaphezulu ngenye into yesosi yetumato kwaye ukulungele ukungcamla.
Irayisi kunye ne-omelette yeshizi
Xa kukho irayisi eseleyo, eqinisekileyo ukuba iyaqheleka, akukho nto njengokuyigcina ukuze ikwazi ukwenza iresiphi emnandi njengale. Kule meko sikhethe i-rice kunye ne-omelette yeshizi. Indibaniselwano ekhethekileyo ongenakuphulukana nayo.
Ipleyiti yerayisi ephekiweyo
Amaqanda ama-3 aphakathi
3-4 izilayi ze-mozzarella cheese
Iipuniwe ezi-4 zeshizi egayiweyo
Kuqala kufuneka uxube irayisi kunye namaqanda, de ibe idityaniswe ngokupheleleyo. Sifaka ipani yokucoca emlilweni ngepunipoon yeoyile. Kuyo siza kudibanisa isiqingatha somxube kwaye siyeke ipheke imizuzu embalwa. Ngelixa, Siza kongeza izilayi zesonka samasi kunye negreythi okanye oyikhethileyo kwitheko. Ngoku lixesha lokugubungela lonke itshizi kunye nenye inxalenye yomxube. Njengayo nayiphi na itortilla, ifuna ukuba siyijike kwaye siyishiye imizuzu emibini okanye emithathu ngaphezulu.
Ungayisebenzisa irayisi emdaka?
Ukuze ukwazi ukwenza ezi ntlobo zokupheka apho i-rice omelette ingcinga ephambili, ungasebenzisa naluphi na uhlobo lwale mveliso. Oko kukuthi, zombini irayisi emhlophe kunye nerayisi emdaka, iinkozo ezinde kunye nezinencasa. Zonke ziya kudityaniswa ngokugqibeleleyo xa kusenziwa izitya ezinje. Ewe kunjalo, kwimeko ye irayisi emdaka singaba ne ukutya okunempilo kakhulu, kunye nefiber kunye neevithamini. Ukongeza, amaqanda aza kongeza iiproteni kwaye ngokungathi khange zanele, sinokuhlala songeza imifuno.
Uyenza njani i-omelette yerayisi ebhaka
Ukuba kuya kufuneka ulungiselele ukutya okwahlukileyo okwahlukileyo, khetha le omelette yerayisi ebhakaweyo. Ewe, kuba sinokusebenzisa i-oveni ukwenza i isitya esilula kunye nesidala Ndiyayithanda lento. Bhala phantsi njani!
I-400 gr yelayisi ephekiweyo
200 gr yeatswele
I-200 gr yepepile
I-300 gr yeetumato
I-100 gr yetshizi
1 icephe yeoyile
Ityuwa kunye ne-oregano
Okokuqala, kufanele kuqatshelwe ukuba ungasoloko utshintsha iipepile okanye iitumato kwityhuna encinci okanye esinye isithako osithandayo. Oko utshilo, silungiselela i-oveni ngaphambili ukuya kwi-170º. Sinqunqa zombini iitumato, iipepile kunye netswele. Sizifaka epanini yokutshiza kunye neoyile encinci. Sibashiya okwemizuzu embalwa kwaye sisuse ukudibanisa nerayisi esele iphekiwe. Kulengxube sidibanisa i-pinch yetyuwa, iziqholo ezifana ne-oregano kunye namaqanda abethiweyo. Xa yonke into ixutywe kakuhle kuya kufuneka uthele kwisitya sokubhaka, ngaphambili yayigalelwe ioyile encinci. Siza kuyivumela ukuba ipheke malunga nemizuzu engama-25. Kodwa lumka, i-oveni nganye yahlukile, ke kuya kufuneka ujonge ukuba indawo ephezulu iqinile na ukuze yazi ukuba yenziwe. Nje ukuba siyisuse embekweni, sibeka itshizi kuyo. Eyona nto intle kule meko kukuba zizilayi, kodwa ungongeza itshizi encinci egreyithiweyo. Kuphela ngoshushu olunikezwe yi-rice tortilla apho itshizi iyanyibilika. Xa lifudumele kancinci, sinokuba sele silidumbile izinyo.
Njengoko ubona, i-omelette yerayisi sisitya esipheleleyo. Kwelinye icala, yeyona nto ilula ukuyenza. Into eza kubhenela kubantu abadala nakubantwana endlwini. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba ube nakho thatha ukutya Njengerayisi esisele nayo. Thatha isithuba!.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » Amangenelo ashushu » Irayisi omelette
UDaniela dal farra sitsho
Inokwenziwa kwakhona nge-pasta. Ndenza ipasta omelette ukuba ndinento eseleyo emva kwesidlo sasemini, ke andiyilahli!
Phendula kuDaniela Dal Farra
Iliwa rock sitsho
kulungile kunqabile kodwa ndiza kuzama kwaye ndifuna iresiphi yokupheka
Phendula kwilitye le-rocio
Kokokuqala ukuba ndiyenze, ndiza kukuxelela ukuba
Enkosi ngokusifunda kwaye ukuba uyasilungiselela, silindele uluvo lwakho.
Enkosi! Ndiyenzile namhlanje kwaye bekumnandi 😀 ukubulisa
Ndenze nje ... Kodwa ndalungisa ezinye izithako ... Rikisiiiimooo Ndiyayithanda kwaye iindwendwe zam azonwabanga ..
Bajonge kakuhle kum jaajajajajajjajajajajajajajaj …………………………………. 😀
Ndihlala ndimhle kunye nesihogo esigqibeleleyo ...
Kwaye uyazi sitsho
Ndiza kuyilungisa, kodwa ijongeka intle. : v
Phendula kuYa uyazi
Kanye le bendiyifuna, bendingazi ukuba ndiyenza njani i-rice omelette, namhlanje ndiyilungiselele kwaye ndiza kukuxelela ngayo. Ndiyabulela kakhulu!!!
Ndenze nje enye, ndongeza iparsley kunye netshizi, zama
Ndiyityile irayisi omelette ukusukela ndisengumntwana, Umama wam wenza irayisi ngamaqhekeza enyama yomnqatha, ngamanye amaxesha ii-ertyisi… ungadibanisa namagqabi eparsley ambalwa ukuze uchukumise umxube neqanda… kumnandi…
Amathuba amahle kakhulu okwenza iitayisi zerayisi
luis gonzalo valverde sitsho
Enkosi kakhulu ngokusinika enye indlela yokuthatha ithuba lokusebenzisa irayisi. Ndithatha eli thuba ukunibulisa kwaye ndininqwenelela unyaka omtsha. ngokubhekisele
Phendula luis gonzalo valverde
Elida uEstere sitsho
Bandincede kakhulu okoko ndapheka irayisi emdaka ngakumbi kwaye ndingazi ukuba mandenze ntoni ngamawaka eeyure.
Phendula uElida Esther